Design - Shenzhen uKumkani Fu Umbala Printing Co., Ltd
Xa ucwangcisa ifayile lwakho kukho iinkalo ezintathu ezibalulekileyo ukugcina engqondweni:
Indawo yokutrima: Oku bubungakanani kubungakanani bephepha ngombala. Oku bubungakanani ncwadi yakho ugqibile uya zalungisa ukuba, ubude kunye nobude kwephepha.
Wopha: Lo indawo xhaxhe ngaphaya komgca lungisa. Ukuba unayo imvelaphi, umfanekiso okanye elementi uyilo ofuna ophela le page, kufuneka ukwandisa oku ngo 1/8 "(3 mm) ngaphaya amanqaku yokutrima.
Indawo Safe: Gcina iibhokisi itekisi kunye nezihloko eziqulathwe kwindawo ekhuselekileyo, leyo kwi asezantsi 1/8 "(3 mm) kwi ukusuka kwindawo yokutrima.
Isishicileli ubeka amaphepha ezibekwe kwimakhishithi, ngoko ke kubalulekile ukuba kumiswe kuchitheka kuzo zonke macala 4 page.
Ukuze ufumane iziphumo angawona iinkangeleko kufuneka emalifakwe imifanekiso Photoshop, kungekhona InDesign:
Xa ulungiselela iifayile zakho umfanekiso e Photoshop, khetha i Hlela / Tshintshela yabucala kwaye khetha enye yezi zilandelayo kulahlo phantsi lwe menu:
• Ukuze GRACoL , Adobe iprofayili: camera GRACoL 2006 (ISO 12647-2: 2004)
• Kuba FOGRA camera, iprofayile Adobe: camera FOGRA39 (ISO 12647-2: 2004)
• Kuba FOGRA uncoated, iprofayile Adobe: Uncoated FOGRA47 (ISO 12647-2: 2004 )
Hlola izikhokelo kweli candelo ukuze ukunceda ukulungiselela iifayile zakho ngokuchanekileyo kangangoko kunokwenzeka. Oku kuya kukunceda ukuba uphephe iimpazamo ngexesha bano-. Ukuba ngaba awuqinisekanga ukuba iifayili zakho zicwangciswe kakuhle nceda qhagamshelana wakho elilawulayo kwentengiso icebiso.
Isicelo Iifayile eyamKelekileyo:
• Adobe Illustrator (. Hayi ezifanelekileyo Ubeko wangaphakathi Nceda ukuthintela ukuba kukulayinisha amaxwebhu zobugcisa kunye nephepha elilodwa, ezifana iilogo, iibhatyi, njl)
• Shicilela PDF ukulungele wadala kwifayile yesicelo adweliswe ngasentla
Sicebisa ukuba usebenzise PostScript, OpenType okanye kweefonti i-TrueType. Ezinye iifonti onakele ngexesha transmission, ezifana uvutha phezu DVD okanye ulayisha nge FTP. Sincoma ngokuveza imigca phambi kokuthumela kwabo.
Musa ukwenza iifonti ezingenawo esihambelanayo lomshicileli befonti. Umzekelo, kwinkqubo yakho yezitshixo ungakhetha "Helvetica" uze ucofe isimbo "Bold" ngenxa yokuba kukho yelanaka "Helvetica Bold" iprinta lwamagama. Kodwa xa ukhetha "Futura Heavy" uze nokusebenzisa isimbo "Bold" ukuba awusokuze ufumane uguqulelo nesibindi yaloo ifonti kuba akukho umshicileli befonti ahambelanayo.
Sicebisa ukuba ukhethe i ifonti ofuna ngqo kwi menu yomgca kunokuba ngokukhetha kwesiseko sohlobo lwamagama nokusebenzisa isimbo. Kunye iifonti ezinkulu eziqulathe ubunzima ezininzi ubuchule akwazi ukwenza iziphumo zakho engalindelekanga.
Xa ucwangcisa umbala wakho zomgca, nceda ugcine ezi zikhokelo engqondweni:
8 pt. kwi 100% ye umbala ongqindilili.
12 pt. kwi-60% kwi-80% of umbala
16 pt. e CMYK umbala. Ezincinane CMYK yefonti iya kuprinta elintlangothi ezitsolo ndibonakale ungapheleli (okanye off irejista) kuba amachaphaza iprintwe njengoko screen.
Nokubanjiswa udlulisela igrafiki okanye umfanekiso ngokuthi 0.25pt ukuthintela naziphi halo ezimhlophe okanye umsantsa macala umfanekiso okanye umzobo. Ngokubanzi inkqubo imibala akukho mfuneko yokuba luvaleleke, nangona kukho ezinye ngaphandle. InDesign iye ucwangcise Useto ngumgibe, ngokubanzi akuyomfuneko ukuba ukhathazeke kuprinto.
Wena kufuneka ulumkele ulungiso xa acela ngaphandle umfanekiso okanye elementi uyilo ukusuka kwisiqalo esiqinileyo. Kukho iindlela ezimbini ukunqanda halo omhlophe, okanye yintoni kubonakala misregistration, ngokusebenzisa i-mibala kuprinto ezichanekileyo okanye overprinting. Overprinting nekucetyiswa ukuba okubhaliweyo okanye obhityileyo imizobo okanye imigca, kodwa khumbula ukuba overprinting uya kongeza umbala elalabelwe ku gqiba umbala engaphantsi kwaye kuchaphazela umbala into.
Ukuba une itekisi eluhlaza (c: 95, m: 0, y: 80, k: 0) ehleli oluhlaza (c: 95, m: 20, y: 10, k: 0) imvelaphi, awazi kufuneka mgibe ngenxa umbala oluhlaza yangasemva eqinileyo YAYE ukuba kwisicatshulwa 16 pt. okanye ezincinane kufuneka ukuseta amagama ukuba OVERPRINT.
Image Beka Up
Iifayile Hi imililo umfanekiso kufuneka kusoloko zingenisiwe TIFF, PSD, AI okanye EPS iifayile. Eyona nto ibalulekileyo enomfanekiso esemgangathweni ubungakanani ifayile lokugqibela. Zonke iifayile umfanekiso kufuneka 300 DPI (amachaphaza nge-intshi) kunye line art kufuneka ibe li-1200 DPI kwi ubukhulu lokugqibela.
A umfanekiso omkhulu ngaske kwi 150 DPI abakwazi elilingana umfanekiso isiqingatha ukuba isayizi ukuba iskeniwe kwi 300 DPI. Zombini kuya kubangela ifayili leyo cishe ubukhulu efanayo.
Xa ulungiselela iifayile zakho umfanekiso ufuna ukufaka ii-mali ilungelo ulwazi. Xa iifayile zakho zincinane kakhulu ke kuvela kufiphale okanye pixelated. Ukuba zinkulu kakhulu zenza umsebenzi imagesetter nzima kakhulu okanye aveze imposiso Postscript.
Images ngaphantsi kwe 300 DPI (okanye 1200 DPI layini art) ziya kunokubangela imposiso ngexesha lenkqubo bano-. Yonke imifanekiso hi-res kufuneka umisele njengoko CMYK, kwaye hayi ngaphezulu kwe + 15% okanye -15% kubungakanani yokuzala. Wobuciko ezantsi ukusuka kwisayithi web idla kakhulu ephantsi-isigqibo zombhalo ukuzala. Kuphephe ukusebenzisa imigca ngaphakathi wobugcisa ukuba sokurhuqa kwe .5 ingongoma.
Yonke imifanekiso kufuneka angeniswe njengoko CMYK, hayi format RGB. Zonke umbala kufuneka retouched kunye nombala zalungiswa Photoshop phambi imifanekiso kokuba ingeniswe InDesign.
Raster okanye bitmap imifanekiso ziqulathwe ngohlobo izikwere ezincinane kwigridi ezifana pattern, eyaziwa ngokuba pixels, ukuba bamele iigrafiki. pixel nganye umfanekiso bitmap unalo ixabiso indawo kunye nombala ethile eziwabelweyo. Uhlobo lwefayile kakhulu zixhaphakileyo TIFF, EPS okanye iifayile Photoshop PSD.
Xa ulungiselela iifayile ifoto zombhalo ukuzala kufuneka phantse lonke uvelise imifanekiso TIFF okanye iifayile PSD. iifayile TIFF zixhaphake kakhulu, kwaye kwifomati evulekileyo, nto leyo ethetha ukuba ungasetyenziswa InDesign okanye Quark. iifayile PSD zingasetyenziswa kuphela kwinkqubo Adobe Photoshop.
Enye ifayile image eqhelekileyo i JPEG. kusetyenziswa Ngokuyintloko zeefoto, JPEG yenye iifomati ezimbini ezixhaphakileyo ifayile esetyenziswa kwi web. Le yifomati zixinaniswe ngoko iinkcukacha ezilahlekileyo ngexesha ucinezelo. Ukuba unayo ifayile JPEG ofuna ukuyisebenzisa eliprintiweyo, yivule ngo Photoshop uze ukhethe: Umfanekiso-> Mode-> CMYK Umbala (okanye Grayscale).
Kulungile ukuba resample ukusuka umfanekiso omkhulu encane omnye. Photoshop uphosa nje ngaphandle pixels ezongezelelekileyo yaye kuya kuvela umfanekiso ezincinane zonke bit ibukhali njengokuba kwakunjalo ngaphambili.
Kuyinto UNGAZE Yingcamango elungileyo upsample ukusuka umfanekiso encinane ukuya esikhudlwana. Kule meko, Photoshop wongeza ipixels kumfanekiso. Le nkqubo unika umbala kwezi pixels amatsha ngokusekelwe umbala pixels angabamelwane. Oku kungabangela umfanekiso blurrier ngaphezu yokuqala, njengoko kubonisiwe kwi ekunene.
Ungaze angenise iifayile umfanekiso GIF wemveliso yoshicilelo.
Images omnyama nomhlophe
Kuxhomekeka iprojekthi yakho, ungakwazi wamisa iintsika zenu zelanga njengoko 1 umbala abamnyama nabamhlophe, duotones, okanye 4 imifanekiso umbala CMYK.
1 umbala image black and white umiselwe ukuya ngokubanzi ngokusebenzisa inkqubo emnyama. Ukugqama izithunzi ezinikelwe imibala.
2 umbala image black and white zimiselwa inkqubo usebenzisa abamnyama kunye umbala PMS. Umbala PMS zingasetyenziswa ukufaka umbala yeSepia okanye PMS gray ukwenza iinkcukacha ezingakumbi amagqabantshintshi grayscalefrom ukuba izithunzi.
4 umbala omnyama nomhlophe ziyenziwa usebenzisa CMYK uze unike iinkcukacha ezininzi ukusuka iimbalasane ukuya izithunzi. 4 imifanekiso umbala omnyama nomhlophe ifuna ulungelelwano ebixhamla ubuncwane kunene. Xa ucwangcisa iifayile zakho, kufuneka siqiniseke ukuba akukho umbala uphose yakho ngemifanekiso. Kufuneka ukuphelisa yamahlelo Photoshop phambi kokuba umfanekiso ingeniswe InDesign.
Isiphumo zonke iifayile esiyua umzekeliso njengoko EPS okanye AI (Illustrator). Qiniseka ukuba batshatise amagama umbala kwezi iifayile kwi amagama imibala efanayo kwi software sebhodi.
Ezinye iinguqulelo ze Adobe Illustrator zikuvumela ukuba aphakamise okanye athobe isisombululo output engagqibekanga Adobe Illustrator kaThixo. Musa ukulungisa esi sicwangciso. Ukuhlisa i zokusombulula kukhokelela umendo kabi ukusekwa. Ukukhulisa ukuze anike iimpazamo ngokungeyomfuneko ngexesha bano-.
Gcina iifayile art umgca njengoko imifanekiso bitmapped. Ukuba abasindise umbala womfanekiso obuNgwevu, imiphetho ukuze imveliso kunye halftone screen obenza kuvela kufiphale okanye ezitsolo.
Ukusebenzisa Black Ink eziqinileyo
Ukuba kukho indawo enkulu emnyama eqinileyo iya ukuwela ezinye wakha nobomvu, kuya kubakho umahluko lexinene phakathi kwiindawo phezu umbala kwaye ezo zingathethi phezu umbala. Isisombululo ukwakha 'izityebi abamnyama "ithinti Umxube ngolu hlobo lulandelayo:
Umbala oluhlaza = 30%
Luhlaza = 30%
Ukusebenzisa le izityebi abantsundu kukuphepha naziphi na iinguqulelo konga ezicaceleyo eziqinileyo ezimnyama. Kananjalo indlela elungileyo ku tswala kwintsunguzi, omnyama iyunifomu eqinileyo, kwanaxa akayi bewela eminye imibala.
Ezinye izinto abamnyama ezifana imithetho, uhlobo, yaye izinto umzekeliso ecekethekileyo kufuneka wakhiwe-100% abamnyama imiselwe ku overprint.
Ukungeza ivanishi kumaphepha ukuba umbala ongqindilili emnyama zijongene iphepha elimhlophe ukuthintela ahambe.
Sokukhululwa Project wakho
Phambi kokuthumela iifayile zakho, nceda sebenzisa umyalelo hlolisiso InDesign ukujonga iifayili zakho.
• imifanekiso kuphela esetyenziswa kwi layout. Qiniseka ukuba amagama kunye neendawo iifayile ezinxulumene musa ukutshintsha emva kokuba kuqokelela iifayile zakho.
• Bonke ubungakanani umfanekiso bitmapped kufuneka ubuncinane 300 DPI, zonke iifayile zobugcisa umgca kumda wesangqa kufuneka ubuncinane 1200 DPI
• TIFF kwaye EPS iifayile kufuneka ibe CMYK, hayi RGB. Yonke imifanekiso TIFF, nabo bonke umgca yomzobo ezobugcisa EPS.
• Faka zonke iintlobo zamagama ezisetyenzisiweyo, kunye iifonti zazo iprinta ehambelana, nokuba womgca isetyenziswa ngokuqhelekileyo.
• Susa zonke imibala ezingasetyenziswanga. InDesign ibala palette has a 'Khetha Zonke engasetyenziswanga "khetho ukuba kuya kukunceda ukuba ukhangele uze ucime ezi swatches.
• Qiniseka umbala ngamnye igama elinye kuphela.
• Yenza lula i kwimizobo ukusebenzisa inani ubuncinane amanyathelo ukuxubana okanye elona nani lincinane lamanqaku endleleni.
• Qinisekisa amaxwebhu Photoshop awaquki maleko ezingasetyenziswanga okanye ifihliwe. Kungenjalo, iimpazamo ukukrazula esinokubakho kwaye ungqameko efihliweyo ukuze output kwaye ukudala iziphumo ezingalindelekanga.
• Susa izinto ezingasetyenziswanga kwi pasteboard okanye izinto ezifihlakeleyo ngokupheleleyo zezinye izinto.
• Onke amaphepha kufuneka babe trims kunye kuchitheka (kuchitheka kufuneka sandiswe 3mm, okanye 1/4 "ngaphaya ngombala kuzo zonke emacaleni 4).
• Bandakanya res PDF ephantsi ukufakwa kunye / okanye laser ephepheni. Bhala amanani iphepha kwi-laser, ukuba amaphepha musa yokuprinta okanye res PDF ephantsi nokubekwa.
• Bandakanya iifayile isicelo okanye PDF eyahlukileyo itekisi kunye inshorensi, ityala nayiphi na amacandelo (endpapers, ndibopha, njl)
• Umbala isikhokelo, ukuba ukwabiwa.
Unako ukuthumela iifayile zakho nge wetransfer, Hightail okanye enye iprogram yokwabelana ngeefayile-intanethi, okanye ephathwayo drive (qinisekisa ukuquka intambo ukuqhagamshela ikhompyutha). Hambisa InDesing okanye hi-res print PDF ulungele kunye namanqaku yokutrima kwaye kuchitheka ifakiwe.
Ukuze ufumane iinkcukacha ezingakumbi ungakwazi ukumisa PDF, nceda undwendwele i-Adobe site uncedo: https://helpx.adobe.com/indesign/how-to/indesign-create-pdf-for-print.html?set=indesign-get -started-kubalulekile-wabaqalayo